Ra’iisul Wasaare Khayre: Dalka Oo Dhan Waa In Is-xilqaan Lagu Dhisaa – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray September 17, 2018 October 11, 2018
Ra’iisul Wasaare Khayre: Dalka Oo Dhan Waa In Is-xilqaan Lagu Dhisaa
Muqdisho, September 17, 2018 — Ra’iisul wasaaraha xukuummadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre, ayaa sheegay in barnaamijka is-xilqaan uu fursad wanaagsan u yahay dib u dhiska dalka iyo wanaajinta dhaxalka jiilka soo koraya.
Ra’iisul wasaare Khayre ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay in hantidooda iyo waqtigooda ay ku bixiyaan barnaamijka is-xilqaan si dib loogu dhiso dalka oo dhan, danaha qarankana si wadajir ah looga shaqeeyo.
“Waa in is-xilqaan lagu dhisaa dalka oo dhan, shacabka oo dhanna ay ka qayb qaataan, waa in ay ka qayb qaataan madaxda qaranku oo ay isxilqaan dalka ku dhisaan”, ayuu yiri ra’iisul wasaaraha XFS.
“Waxaa Muuqda horumar wayn oo ay ku tillaabsadeen shacabka Soomaaliyeed maadaama ay billaabeen in dalkooda ay dib u dhisaan iyaga oo isticmaalaya hal-ku-dhigga “Is-xilqaan”, ayuu sheegay ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre.
Shirkii golaha wasiirrada ee lagu qabtay magaalada Garowe ayaa lagu ansixyay barnaaminka is-xilqaan oo lagu dhisayo guud ahaan xarumaha dawladda, goobaha taariikhiga ah iyo waddooyinka.
Qormadii HoreHore Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Kormeeray Xarunta Maamulka Gobalka Banaadir
Qormada XigtaKu Xiga Hoggaanka Dalka Oo Caddeeyay In Laga Soo Gudbay Xilligii Ajaanibtu Ay Dhex-dhexaadin Jireen Madaxda Dalka